श्मशानघाटमा शिव मन्दिर कि, शिव मन्दिर छेउ श्मशानघाट ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
श्मशानघाटमा शिव मन्दिर कि, शिव मन्दिर छेउ श्मशानघाट ?
श्मशानघाटको खरानी लगाउनुभित्रको रहस्य
अनुपम भट्टराई || 11 March, 2021
पाशुपति क्षेत्रको एरियल भ्यू । तस्विरः नरेन्द्र श्रेष्ठ
प्रा.डा. गुरुप्रसाद सुवेदी
भगवान शिव महाश्मशानका देवता हुन् । शिव एउटा तत्व हो । श्मशानघाटमा नै उहाँ बस्नुभएको छ । भूतप्रेत, पिशाच, राक्षस सबैलाई एकसाथमा लिएर उहाँ मेलमिलापका साथ बस्नुभएको छ । श्मशानको खास अर्थ सम्पूर्ण सृष्टिको अन्त्य भइसकेपछि जे अवस्थित छ, त्यो नै श्मशान हो भन्ने हुन्छ ।
के हो श्मशानघाट ?
यो पृथ्वी, जल, हावा, तेज, आकाश र यो ब्रह्माण्ड सबै समाप्त हुँदा बाँकी रहेको जुन स्थान छ, त्यो नै श्मशान हो । अझ भन्नुपर्दा शिवजी बस्ने स्थानलाई श्मशान नभनेर महाश्मशान भन्ने गरिन्छ । महाश्मशान हुँदा पनि भगवान शिव त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने अर्थमा श्मशानघाटमा शिवजी हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ ।
श्मशानघाटमा शिवजी बस्ने भएपछि नै उहाँ संहारका देवता भएकोले उहाँ बस्ने नजिकै श्मशानघाट बनाइएको हो । शिवजी श्मशानमा नै बस्नुहुन्छ । उहाँलाई खरानी धेरै मन पर्छ । खरानी भनेको एउटा अवशेष मात्रै हो । त्यसैले शिवतत्व भनेको पनि अदृश्य तत्व हो ।
शुरुवात पनि वहाँ नै र अन्त्य पनि वहाँ नै भएकोले श्मशानमा शिवजी बस्नुहुन्छ । शिवजीले ‘म’को अस्तित्व अर्थात् आत्माको अस्तित्व व्यापक छ भन्ने देखाउनका लागि खरानीको प्रयोग गर्नुभएको हो । यो सबै सृष्टि खरानी हो भनेर वैराग्य देखाउनका लागि श्मशानमा वहाँले बास गर्नुभएको हो । त्यसैले साधकहरूले यसलाई आफ्नो अलंकारको रूपमा लगाउँछन् ।
जस्तै व्यक्ति मरेर जाँदा जलाइसकेपछि घाट श्मशानघाट हुन्छ । मानौँ यो पृथ्वी पनि सम्पूर्ण आकाश, पाताल, तारामण्डल, यो ब्रह्माण्ड पनि पानी, हावा, तेज सबै समाप्त हुँदा बाँकी रहने स्थान नै श्मशान हो ।
महाश्मशान घाटमा विराजमान रहनुभएका कारण श्मशान घाटमा शिवजी हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ एउटा हो भने अर्को जीवनलाई सर्वस्व ठान्ने मानिसले जीवनपछिको अस्तित्वलाई बुझेको हुँदैन । जीवनप्रति पनि थोरै चेतना बाँकी रहन्छ कि रहँदैन ? यो जीवन कहाँबाट आइपुग्यो भन्ने बुझेको हुँदैन । तर, शिवतत्वको अनुसन्धान गर्ने मानिसले यो शरीर एउटा मात्र कपडाले ढाकिएको जस्तै हो, यो फेर्दा पनि चेतना छ भनेर बुझ्छन् । त्यो चेतनाको शाश्वत सिद्धान्तलाई बुझ्नका लागि श्मशानघाटमा गएर अनुभव गर्दछ । त्यो अनुभव गर्ने, साधना गर्ने स्थान श्मशान हो । श्मशानमा गएर अनुभव गर्दा नै शिवतत्वको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले श्मशानघाटमा शिवजी हुनुहुन्छ भनेर प्रसिद्धी भयो, यही प्रसिद्धीलाई मूर्तरूप दिन हाम्रो परम्परामा श्मशान घाटको छेउछाउमा मन्दिर बनाउने परम्परा बस्यो ।
एक अर्थमा भन्नुपर्दा जहाँ शिवजी हुनुहुन्छ त्यहाँ श्मशान होइन, जो सम्पूर्ण संसारको समाप्तिपछि पनि जुन श्मशान बाँकी रहन्छ, त्यहाँ शिवतत्व व्यापक थियो, छ र रहिरहन्छ भन्ने अर्थमा श्मशान घाटमा शिवजी हुनुहुन्छ भनेर मानिएको हो । र, श्मशानघाटको खरानी लगाउनुभित्र पनि यही रहस्य हो कि, सम्पूर्ण सृष्टि समाप्त भइसकेपछि पनि शिवतत्व व्यापक छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।
(महेश संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठका प्राचार्य डा. सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित)